PressReader - Ilanga: 2017-11-09 - UZONANDISA NGAKUBO OKOKUQALA NGQA USJAVA
UZONANDISA NGAKUBO OKOKUQALA NGQA USJAVA
Ilanga - 2017-11-09 - Izindaba - SANDILE MAKHOBA
BAZOBONA isihlabani sendawo sinandisa okokuqala ngqa endaweni yangakubo abantu baseBergville, maphakathi nentshonalanga yeKwaZulu-Natal.
UJabulani Hadebe odume ngelikaSjava, ongowokudabuka eBergville uzobe edlala okokuqala ngqa ngakubo emcimbini iDrakensberg Extravaganza Music Experience.
Leli ciko elifike kwezwakala endimeni yezikaqedisizungu libhale ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana u-Instagram ukuthi lizobe licula okokuqala ngakubo.
“Ekugcineni ngizocula ngasekhaya eBergville,” kubhala uSjava ekhasini lakhe.
USjava ungomunye wabaculi abahlonishwayo ngethalente labo. Uke waba sematheni ngendlela agqoka ngayo emicimbini yezindondo okubalwa kuyo namaMetro FM Music Awards kanye namaSouth African Music Awards (SAMA).
Njengamanje lo mculi uzinze eGoli, kanti usayine ngaphansi kwenkampani i-Ambitiouz Entertainment.
USjava uzakhele udumo ngokucula ngendlela ehlukile ngesikhathi epikwe ezingomeni zabanye abaculi.
Ingoma eyamakhela igama kakhulu ngekaMiss Pru DJ esihloko sithi “Amen”. Ngemuva kwalokho wakhipha i- album yakhe ethi “Isinamuva” enezingoma ezishisa izikhotha okubalwa kuzona “Amafu, Baba, Before nezinye”.
Kulo mcimbi uzobe eshiyelana inkundla namanye amaciko ahlonishwa kakhulu okubalwa kuwona uSomizi Mhlongo, uBabes Wodumo, Samthing Soweto, u-Amanda Black, iBeatenburg, uDJ Fresh, uMondli Ngcobo, uDJ Bongz, iJunior Mambazo nabanye abaningi. Uzobe useBergville Bowling Club kusukela zingama-23 kuya mhla zingama-25 kuLwezi (November) kanti amathikithi aseyatholakala eComputicket, ngo-R150 ajwayelekile, bese kuba wu-R600 awezicukuthwane.
ISITHOMBE NGABE: TWITTER
USJAVA uzonandisa okokuqala ngqa ngakubo eBergville.
USIPHO Makhabane uthi ukujabulele ukusebenza no-Oliver Mtukudzi kwi-albhamu yakhe entsha esihloko sithi “Sinekhaya”.